ILufthansa Group ilungiselela ukukhula okunamandla kwe-2021 emva kokulahleka kokusebenza kwe-5.5 yezigidigidi ze-euro
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa Group ilungiselela ukukhula okunamandla kwe-2021 emva kokulahleka kokusebenza kwe-5.5 yezigidigidi ze-euro
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Izithintelo zohambo kunye nokuhlukaniswa kwabantu kukhokelele ekunciphiseni okukhethekileyo kwimfuno yohambo lomoya
Ukuncitshiswa kweendleko kuye kwaqhubela phambili kwaye kusetyenziswa idreyini yemali eqingqelwe kwii-300 ezigidi zeerandi ngenyanga kwikota yesine
UCarsten Spohr: “Ukwamkelwa kwilizwe liphela, ugonyo lwedijithali kunye nezatifikethi zovavanyo kufuneka zithathe indawo yokuthintelwa kohambo nokuvalelwa”
I-Lufthansa Group Airlines ikulungele ukunikezela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 zomthamo kwakhona kwixesha elifutshane kwaye ijolise ekunikezeleni abasebenzi abali-100,000 umbono wexesha elide
UCarsten Spohr, uCEO weDeutsche Lufthansa AG, uthi: “Kunyaka ophelileyo bekukho owona mceli mngeni kwimbali yenkampani yethu - kubathengi bethu, kubasebenzi bethu nakwizabelo zethu. Izithintelo zohambo kunye nokuhlukaniswa kwabantu kukhokelele ekunciphiseni okukhethekileyo kwimfuno yohambo lomoya. Ngoku kwamkelwe kwilizwe liphela, ugonyo lwedijithali kunye nezatifikethi zovavanyo kufuneka zithathe indawo yokuvalwa kokuhamba kunye nokuvalelwa kwabantu ukuze abantu baphinde batyelele usapho kunye nabahlobo, badibane namaqabane oshishino okanye bafunde ngamanye amazwe neenkcubeko. ”
Ukujonga kuphuhliso lwexesha elizayo lwe- Iqela leLufthansa, UCarsten Spohr uthe: “Ingxaki eyodwa ikhawulezisa inkqubo yotshintsho kwinkampani yethu. I-2021 iya kuba ngunyaka wohlengahlengiso kunye nokuphucula imeko yethu. Ukugxila kuya kuhlala kuzinzo: Sijonga ukuba zonke iinqwelomoya ezindala kuneminyaka engama-25 ziya kuhlala emhlabeni ngokusisigxina. Ukusukela ngehlobo ukubheka phambili, silindele ukuba ibango liza kuphinda lithathe kwakhona nje ukuba imida yohambo ethintelweyo yehliswe ngokukhutshwa kweemvavanyo kunye nezitofu zokugonya. Sizimisele ukunikezela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 zomthamo wethu wangaphambi kwentlekele kwakhona kwixesha elifutshane njengoko imfuno inyuka. Ngeqela elincinci, elikhawulezayo nelizinzileyo leLufthansa, sifuna ukugcina indawo yethu ekhokelayo kwihlabathi liphela kwaye sikhusele imisebenzi yabasebenzi abamalunga ne-100,000 kwixesha elide. ”
Ibango lehle kakhulu ngonyaka wobhubhane waseCorona kunye nezithintelo zokuhamba ezinxulumene noko. Ingeniso kwiqela laseLufthansa lehla laya kwi-13.6 yezigidigidi ze-euro kwi-2020 (kunyaka ophelileyo: i-36.4 yeebhiliyoni zeerandi). Ngaphandle kokuncitshiswa okukhawulezileyo nangokubanzi kweendleko, iqela laseLufthansa kuye kwafuneka linike ingxelo nge-EBIT ehlengahlengisiweyo yokuthabatha i-5.5 yeebhiliyoni zeerandi (kunyaka ophelileyo: inzuzo ye-2.0 yezigidigidi zeerandi). Umda ohlengahlengisiweyo we-EBIT wawuthathe iipesenti ezingama-40.1 (kunyaka ophelileyo: kunye neepesenti ezi-5.6). Idreyini yokusebenza kwemali kwikota yesine ye-2020 yayijikeleze i-300 yezigidi zeerandi ngenyanga. Inkqubela phambili kulwakhiwo ngokutsha ilinganisele ifuthe lemeko yesifo esonyukayo kwimivuzo. Iindleko zabasebenzi zancitshiswa kakhulu ngokuncitshiswa kwabasebenzi, izivumelwano zobunzima namaqabane ezentlalo kunye nokusebenza ixesha elifutshane. Ekupheleni konyaka we-2020, inani labasebenzi yayili-110,000, malunga neepesenti ezingama-20 ezantsi kunonyaka ophelileyo. Ilahleko ye-EBIT exeliweyo yayijikeleze i-1.9 yezigidigidi zeerandi ezantsi kwi-7.4 yezigidigidi ze-euro, ikakhulu ngenxa yokubhala ngokukodwa kwinqwelomoya kunye nokulunga. Ingeniso iyonke yafikelela kwi-6.7 yeebhiliyoni zeerandi (kunyaka ophelileyo: i-1.2 yezigidigidi zeerandi).
ILufthansa Cargo ifezekisa iziphumo zerekhodi
Ngokuchasene neenqwelo moya zabakhweli, icandelo leemithwalo leQela laxhamla ekunyukeni kwemfuno apha enyakeni. Yonyuselwe kukonyuka okunamandla kwizivuno eziphakathi phakathi kwemfuno eqhubekayo, iLufthansa Cargo iphumelele iziphumo ezirekhodiweyo nge-EBIT ehlengahlengisiweyo ye-772 yezigidi zeerandi (kunyaka ophelileyo: i-1 yezigidi zeerandi) ngaphandle kokuhla kwepesenti ye-36.
Inkcitho mali kwiQela laseLufthansa yacuthwa malunga nesibini kwisithathu ngonyaka ngo-2020 ukuya kwi-1.3 yezigidi zeerandi (kunyaka ophelileyo: i-3.6 yezigidigidi zeerandi), ikakhulu kwisiseko sezivumelwano ezibanzi kunye nabavelisi beenqwelo moya. Oku kubonelela ngokuhlehliswa kokuhanjiswa kweenqwelomoya ngo-2021 nangaphaya, ukuze inkcitho yemali eyinkunzi yonyaka ibe sezantsi kunokuba bekulindelwe ngaphambili nakwiminyaka ezayo. Ukuhamba kwemali ehlengahlengisiweyo yasimahla yayiyi-3.7 yeebhiliyoni zeerandi (kunyaka ophelileyo: i-203 yezigidi zeerandi), nge-3.9 yezigidigidi zeerandi ezihlawulelwe ukubuyiselwa kwetikiti kuphela. Oku kwahlawulwa yi-1.9 yeebhiliyoni zeerandi kubhukisho olutsha. Ukuphuma kwemali okuseleyo bekuncitshisiwe ngolawulo olungqongqo lwezinto ezifumanekayo nezihlawulwayo.
Ityala lilonke kubandakanya amatyala okuqeshisa anyukile ukuya kuthi ga kwi-9.9 yezigidigidi ze-euro (kunyaka ophelileyo: i-6.7 yezigidi zeerandi). Amatyala omhlala-phantsi anyuke ngeepesenti ezingama-43 ukuya kwi-9.5 yeebhiliyoni zeerandi (kunyaka ophelileyo: i-6.7 yezigidigidi zeerandi), ikakhulu ngenxa yokwehla kwenqanaba lenzala elisetyenziselwa ukuphungula uxanduva lwepenshini ukuya kwiipesenti ezi-0.8 (kunyaka ophelileyo: iipesenti ezi-1.4).
Ukusukela nge-31 kaDisemba ngo-2020, iQela laseLufthansa lalinemali ekhoyo malunga ne-10.6 yeebhiliyoni zeerandi, apho i-5.7 yezigidigidi zeerandi ezinxulumene nemilinganiselo yozinziso lukarhulumente olungasetyenziswanga. Ukuphela kwe-2020, iQela laseLufthansa lalichonge phantsi imali yokuzinzisa kurhulumente eyi-3.3 yezigidi zeerandi, apho i-1 yezigidi zeerandi sele ihlawulwe okwangoku.
Kwisiqingatha sesibini se-2020, iqela liphumelele ukubuyela kwimarike eyinkunzi kwaye lonyusa imali ye-2.1 yeebhiliyoni zeerandi ngebhondi kunye nenkxaso mali yenqwelomoya. Ukongeza, nge-4 kaFebruwari iQela libeke iibhondi ezimbini kunye nomthamo opheleleyo we-1.6 yezigidigidi zeerandi, ingeniso yayo isetyenzisiwe phakathi kwezinye izinto ukubuyisa imali-mboleko ye-KfW ye-1 yezigidi zeerandi. Ngokubanzi, ukukhutshwa kwemali kwakhona kwexesha elide kuwo onke amatyala emali ahlawulwe ngo-2021 kukhuselekile.
“Intengiselwano zamva nje zibonise ukuba intembelo yentengiso inenkampani yethu kangakanani. Iqela laseLufthansa lixhaswe ngezimali ngaphaya konyaka wama-2021. Oku kuyancedwa nakwizinto ebezisetyenziswa ngaphambili zokuzinza, esinokuthi sisebenzise kuzo xa kufuneka siqinise ukomelela kwethu, ”utshilo uRemco Steenbergen, iGosa eliyiNtloko lezeziMali laseDeutsche Lufthansa AG.
Amanani ezithuthi ngo-2020
Ngo-2020, iinqwelomoya zeQela laseLufthansa zanikela malunga nesinye kwisithathu seenqwelo moya okanye umthamo (weekhilomitha ezifumanekayo zokuhlala) zeepesenti ezingama-31 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Kwizigidi ezingama-36.4, inani labakhweli lalingama-25 eepesenti kwinani lonyaka ophelileyo, okukhokelele kumthwalo weepesenti ezingama-63, amanqaku eepesenti ezingama-19.3 asezantsi kunonyaka ophelileyo.
Ngenxa yokupheliswa kwamandla eempahla zesisu kwiinqwelo-moya zabakhweli, umthamo wempahla wehle ngama-39 epesenti. Iikhilomitha zothutho ezithengisiweyo zehle ngeepesenti ezingama-31 ukuya kwi-7,390 yezigidi zeetoni kwangaxeshanye. Kwangelo xesha, umthwalo wanyuka ngamanqaku eepesenti angama-8.4 ukuya kwiipesenti ezingama-69.7. Umyinge wezivuno unyuke malunga neepesenti ezingama-55 ngenxa yokunqongophala konikezelo.
Iqela laseLufthansa lixhamle kwinkqubo yalo yehabhu. Ngokungafaniyo nabantu abakhuphisana nabo, ababonelela kuphela ngoqhagamshelo lwenqaku, amanqaku eenqwelo moya zeLufthansa Group babekwazi ukuhambisa isixa sezithuthi ezisezantsi kwiindawo zabo kwaye bagcina unxibelelwano olubalulekileyo. Ukongeza, uthungelwano olusondeleyo phakathi kwabakhweli kunye nokuthuthwa kwemithwalo kwiihabhu lwenze ukuba kube lula ukufumana amakhonkco onikezelo lwehlabathi.
Kunyaka ophelileyo, inani labasebenzi lehle nge-28,000. EJamani, eminye imisebenzi engama-10,000 iya kuncitshiswa okanye iindleko ezifanayo zabasebenzi kuya kufuneka zibuyiselwe. Iqela leenqanawa liza kuncitshiswa liye kwiinqwelomoya ezingama-650 ngonyaka ka-2023. Phakathi kwiminyaka elishumi, iqela lilindele ukuba inqanaba lomthamo libuyele kwiipesenti ezingama-90. Ukongeza, iQela livavanya ukulahlwa kweenkxaso-mali ezibonelela kuphela ngezivumelwano ezincinci kunye neshishini eliphambili.
Nanini na xa kuthintelwa izithintelo, ukubhukisha kuhlala kunyuka ngokukhawuleza kwindawo yezithuthi. Kunyaka opheleleyo we-2021, iQela lilindele ukuba isibonelelo sonyusa siye kwi-40 ukuya kwi-50 yepesenti yamanqanaba e-2019, kwaye ulindelo luhlala lukhona lokuba ukuhamba kwemali okuqinisekileyo kuya kuveliswa xa amandla okubonelela engaphezulu kweepesenti ezingama-50. Ngokwandiswa kwesicwangciso seshishini lokhenketho kunye nokuqhubeka okuqinileyo kweLufthansa Cargo, iQela likwimeko yokusebenzisa amathuba entengiso okwethutyana. Ukwanda kwicandelo leempahla kuqhubeka.
Umndilili wenyanga wenkcitho yemali yokusebenza, ngaphandle kweenguqulelo zokusebenza, inkcitho yenkunzi kunye nenkcitho enye kunye nohlengahlengiso, kulindeleke ukuba ibekelwe umda kwi-300 yezigidi zeerandi kwikota yokuqala ye-2021.
“Enkosi kumanyathelo ethu enkxaso mali, sinemali eyaneleyo yokumelana neemeko zentengiso ezihlala zinzima. Inyathelo elilandelayo kukomeleza iphepha lethu lokulinganisa nokunciphisa ityala. Ngokwenza njalo, siya kunciphisa iindleko zethu ngokulungelelanisa ngempumelelo. Intlekele yethu kunye nolawulo lweendleko luqale ngokukhawuleza kunokuba bekucwangcisiwe. Kwangelo xesha, ishishini lethu liye labuya kancinci kancinci kunokuba besicinga. Ukongeza ekubuyiseni imali yozinzo lukarhulumente, injongo yesicwangciso-qhinga sethu sezemali kukuba iimarike zezemali ziphinde ziphonononge ukufaneleka kwethu kwetyala ukuya kwinqanaba lotyalo-mali kwixesha eliphakathi, utshilo uRemco Steenbergen.
Iqela laseLufthansa lilindele ilahleko yokusebenza, elinganiswe ngokwe-EBIT ehlengahlengisiweyo, ukuba ibe sezantsi ngo-2021 kunangonyaka ophelileyo.